Abangaphoqi abangenazo izindlu zamasonto
IZAYONI ezingenazo izindlu zamasonto zinxuswa ukuthi zingakhonzeli ezindlini ezincane emakhaya ngoba lokho kungasabalalisa iCovid-19. Isithombe: Doctor Ngcobo/African News Agency(ANA)
Phili Mjoli | April 1, 2021
IZAYONI ezingenazo izindlu zamasonto zinxuswa ukuthi zingakhonzeli ezindlini ezincane emakhaya ngoba lokho kungasabalalisa iCovid-19.
UMengameli wesigungu esimele iZayoni kuleli iHlangana Zion, uMbhishobhi Thulani Gwala, uthe amagatsha aye akhonzele ezikoleni nasemanyuvesi angakavumeleki ukuthi asebenzise lezo zindawo, awangaphoqi ahlangane e-dinning room ngoba ethi avumelekile ukukhonza.
“ Imithetho eshaywa uhulumeni iphephisa thina, ngeke kube kuhle ukuthi ngemuva kokukhonza ngePhasika bese kufa abantu. Uma singenayo indawo evulekile asingazimpintshi kwencane sibe u250 . Uhlelo lokuthandaza oluzokwenza ukuthi sijuluke asizulwenza, izicathulo azizukhunyulwa, kuzocula ikhwaya. Abantu bazosontela ngasemakhaya ukuze singabi baningi,” kusho uGwala.
UGwala ubephawula ngemigomo ebekwe uMengameli uMnuz Cyril Ramaphosa okumele ilandelwe ngempelasonto yePhasika.
Unobhala womkhandlu wamabandla, iSouth African Council of Churches (SACC), uMbhishobhi Malusi Mpumlwana, uthe amabandla amaningi anelisekile ngesibalo samakholwa okumele abe senkonzweni.
" Sasicele ukuthi kuvunyelwe u50% wamakholwa esontweni, uhulumeni wasinika u250. Amabandla amaningi anelisekile ngalesi sibalo ngoba awanawo amasonto amakhulu. Akhona amabandla amakhulu afana neZCC neSt Johns kubo u250 yisibalo esincane ngenxa yobukhulu bawo," kusho uMbhishobhi Mpumlwana.
UMbhishobhi Marothi Mashashane weSouth African National Christian Forum, uthe: “Sijabule kakhulu ngesinqumo sikahulumeni, ukube akakwenzanga lokho ngabe siye enkantolo , amaphepha bese siwalungisile ," kusho yena.
Inhlangano yabadayisa ubhiya, iBeer Association of South Africa , ithe ikhathazekile ngokuvalwa kwezindawo ezidayisa utshwala obuthengwa uhambe nabo kodwa kuvulwe ukuphuzela ezindaweni ezidayisa utshwala obuphuzelwa khona.
Isikhulu sale nhlangano uNkk Patricia Pillay sithe: “ Besisaqala ukusimama sesiphinde siyavalwa. Njalo uma izibalo zabahaqwa yiCovid-19 zikhuphuka kuyavalwa ukudayiswa kotshwala, sizogcina singasakwazi ukuphakama,"
UMnuz Lucky Ntimane we-National Liquor Traders Council, uthe bajabule ngokuthi ukudayiswa kotshwala akuvaliwe thaqa.
Uthe amaholidi ePhasika nakaDisemba yiwona amqoka emkhakheni wokudayiswa kotshwala.
Uqhube wathi kumele kube nendlela yokulawula izindawo ezidayisa utshwala othenga uhambe nabo ngoba uma kungenziwa lokho baningi abazophelelwa imisebenzi.
UMengameli we-EFF uMnuz Julius Malema, uthe imithetho elawula impelasonto yePhasuka iyanenga, uMengameli ukhuthaza ukuthi abantu baphume emakhaya bayophuza ezindaweni zokuphuza bese beyathelelana.
" Ukhuphula isibalo sabantu okumele babe senkonzweni ngesikhathi sePhasika," kusho yena.
Umholi weDA uMnuz John Steenhuizen, uthe le migomo izofaka ingcindezi engenasidingo kwezomnotho okuzokwenza ukuthi kulahleke eminye imisebenzi.
UMnuz Velenkosini Hlabisa umengameli we-IFP, uthe bekulindelekile ukuthi kube nemithetho elawula ukuziphatha kwabantu ngePhasika.
" Isibalo samakholwa okumele abe senkonzweni samukelekile, ukulawulwa kokudayiswa kotshwala bekungeke kugwemeke," kusho uHlabisa.